'रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५'
‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५’
कुरा यहीँ बाट सुरु गरौँ कि ?
चरम गरिबी, अभाव र पछौटेपनको पर्यायजस्तै बनेको कर्णाली उस्तै छ कि फेरिँदै छ ? यो प्रश्न (२०११ डिसेम्बर २०) सडकमार्गबाट कालीकोट र जुम्लाको सिँजा उपत्यका पुगेर तयार पारिएको साझा सवालका सञ्चालकको प्रश्न हो । २०११ पछि देशमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छर । देश सङ्घीयतामा छ, प्रदेशहरूका नाममा देश परिवर्तनको मुहार फेर्न कसिएको छ । यसै क्रममा कर्णाली प्रदेश बनेको छ । यसको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर तोकिएको छ । कर्णाली विकासका लागि भनेर प्रदेश सरकारले रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ घोषणा गरेको छ ।
रारा–कर्णाली राजा महेन्द्रको भ्रमण पछि प्रचारप्रसारमा आएको मानिन्छ । राजा महेन्द्रले रचना गरेको राराको वर्णनबाट सुरु गर्न मन लाग्यो, मन थाम्नै सकिन र लेखे :
रारामा एउटा मन घुम्दै छ जहाँ
सुन्दरताले राजा महेन्द्र हराए तहाँ
माथिका हरफ मेरै आफ्ना रचना हुन् । जुन हरफले राजा महेन्द्रको रारा मोहलाई व्याख्या गरेको हुँ बाँकी उनकै शब्दबाट सुरु
के खनायो यसै रारामा
भनिन्छ, २०२० साल चैत महिनाको उखरमाउलो मौसममा मुगुको रारा ताल पुगेका स्वर्गीय राजा महेन्द्रलाई राराले शितलो मात्रै दिएन, कविता कोर्न बाध्य पार्‍यो । संसारकै राजा महाराजाहरू निर्दयी हुन्छन्, कतै त झुक्न र पग्लिन पनि सक्नुपर्छ भन्ने सभ्यताले राजदरबारमा प्रवेश पाएकै हुँदैन । उतिखेर राजा महेन्द्र पनि झुक्नका लागि होइन, बहादुरी प्रदर्शन गर्न रारा पुगेका थिए । काठमाडौँबाट घोडा चढेर विकट मुगुको रारा पुग्नु पछाडि महेन्द्रको खास उद्देश्य थियो, रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बँदेलको सिकार गर्नु । तर, जब रारा तालको किनारमा महेन्द्रले घोडा रोके, घोडाबाट झरेर धुपिको रुखमुनि सुस्ताए र राराको निलो पानीमा एकटक हेरिरहे, तब उल्टै राराले सिकार खेल्यो महेन्द्रको मनमा । महेन्द्रले राराको नाममा कविता कोरे, आँफ्नै नामलाई पनि घोलिदिए राराको कञ्चन जलमा । संयोग नै भनौँ, असिना पानीका कारण पनि महेन्द्रको बदेल सिकार गर्ने योजना पूर्ण रूपमा समाप्त भयो । राराबाट पुरै पग्लिएर फर्किए, राजा महेन्द्र ।
झन्डै ५४ वर्ष पछि मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ । कर्णाली प्रदेश आफ्नो अस्तित्वमा आएको छ, जहाँ राजाले कविता कोरे त्यही ताल आज चर्चामा छ । रारा पर्यटन महोत्सव २०७५ ले माजिक सञ्जाल हेर्दा लाग्छ रारा महोत्सव चलिरहेको छ । मनलाई सोधेको पनि ‘अँ रारा महोत्सव भइरहेको छ, जाऊ रारा हेर्न संसारकी राम्री अप्सरा स्वर्गबाट रारा आएकी छिन् रे’ । यता राजधानीको रूपमा रहेको वीरेन्द्रनगर आफैमा खुसी छैन । मेरा नजिकै बुलबुले र बराह ताल छन् । यिनको त संरक्षण छैन, बिना बाटो, असहजतामा लुकेको रारातालको कसरी सहज दिन आउला भनी बाटो हेरिरहेको कुरा सुटुक निरही राजधानीलाई बताउँछ । पंचायतकालमा राजा चिलगाडी चढेर आउँथे र विश्राम गर्थे । अनि कविता कोर्थे काठमाडौँ फर्कन्थे र किताबमा मलाई कैद गरिदिन्थे ।
विदेशी पर्यटक (खैरे) आउँथे फोटो खिच्थे क्यामरामा कैद गरेर सात समुन्द्रपारि लैजान्थे र कस–कसलाई देखाउँथे जो मेरो खुल्लमखुल्ला शरीर हेर्थे अनकन्टार पहाड छिचोल्दै मलाई हेर्न आउँथे । यति राम्री रारा त्यो पनि कर्णालीमा यै ताल पोखराका छेउ तिर पूर्वको झापा तिर भए मलाई कति माया गर्थे होला । सरकार का मन्त्री पनि कति आउँथे जान्थे । यस्तै चलिरेको थियो, राजा विरेन्द्रको वंश नाश भयो । राजा वीरेन्द्रका कोही नातेदार हेलिकप्टर सहित अहिले सम्म मेरै गर्भमा छन्, न कोही खोज्न आए न कोही मलाई सोध्न आए ।
यसरी म विरक्तिदै गर्दा सुनेको छु मेरो नाममा ठुलै हल्ला देशभरमा चलिरेको छ । मेरो नाममा महोत्सव हुँदैछ रे । आऊ मेरो यही सुन्दरता सँग रमाऊ जुन तिम्रा लागि अविस्मरणीय हुनेछ । म दिनभरिमा आफ्नो रूप फेरिरहने गर्दछु । म जेष्ठ देखि आश्विन महिना सम्म विभिन्न फुलहरूले सजिएर स्वर्गकी अप्सरा जस्तै देखिन्छु । मेरो अर्को एक थप विशेषता के छ भने यस तालमा विश्वमा अन्यत्र कहीँ पनि नपाइने असला (हिमाली) माछा पाइन्छ । मेरो छेउबाट करिब ३ घण्टाको पैदल यात्रा पश्चात् मेरो पश्चिमतर्फ रहेको मुर्माटपमा पुग्न सकिन्छ । जहाँबाट मेरो खुल्लमखुल्ला जिउ र बैँस देखिन्छ र तिमीहरू लोभले हेरिरेने छौ । मेरा लागि दाजुभाइ जस्ता देखिने मनमोहक दृश्यका सहिपाल हिमालको श्रृङखलाको मनोरम अवलोकन गर्न सकिन्छ । मेरै शरीरमा सिस्ने र र कान्जिरोवा हिमालको मनोरम दृश्य देख्ने छौ ।
प्रदेश सरकारलाई सलाम जसले मेरो नाम विश्वभरि चिनाउँदै लैजाने चेष्टा गरेकोमा । हुन त मेरै कर्णालीका मुख्यमन्त्री बनेका छन् केही गर्नुपर्छ भनी दिनरात लगाए र जनयुद्ध गरी आएका छन् । तिनलाई थाहा छ मेरा र कर्णालीका दुख कति छन् भने बारेमा । जनयुद्ध ताका सायद कर्णाली चुमेका पनि होलान् घुमेका पनि होलान्, समाज बदल्ने चाहाना बोकेका मेरा आफ्नै मुख्यमन्त्री ज्यु, म नबदलिए समाज बदल्ने पैसा आउँदैन । मेरा आँगनसम्म पुग्ने जो कोही मेरा पाहुनालाई सहजै जाने बाटो बनाई दिनु अझ राम्रो हुनेछ । चिलागाड़ी चढाउनु भन्दा पनि मोटर चल्ने बाटो बनाउनु जसले गर्दा मेरा आँगन सम्म आउन्याले सुर्खेत देखि दैलेख, कालिकोट र जुम्ला हुँदै आएमा हामी कर्णाली, भेरी र राप्ति मिली बनेको प्रदेश को रहन सहन जानुन् । हाम्रा कर्णाली तिर खेत बाँझो छ तर चामल घरभरि छन् । बारीमा तोरी छैन, तर भान्सामा बिना तेल तरकारी पाक्दैन, चिल्लो नभए हामीलाई खाना मन पर्दैन । गोठमा बाख्रा, खोरमा भैँसी छैनन् तर हामी दूध, माछा मासु र भात खाएकै छौँ । भारतसँग हाम्रो सीमा जोडिएको छैन तर तरकारी खाएकै छन् । कपडा उधोग छैनन् लगाएकै छौँ, कति हो कति कुरा गरी साध्य नै भएन ।
सुर्खेतबाट जाने बस र अरू सवारीसाधनलाई त बाटो पुग्याको छैन, कसरी मेरा आँगन पाँच लाख आगन्तुक कसरी आउलान् ? के तिनी पाँच लाख नव आगन्तुक मेरो घुम्तोमा लपेटिएको हेरुँला चिन्तामा छु । म रारा मेरा मुख्यमन्त्री ज्यु, आजका मिति सम्म गरिबी अशिक्षा के के हो के के नाथरिका उपमा कसरी हटाउने होला चिन्तामा छु । कमसेकम म लुकेर एक्लै त बहकिएकी छु तर अब यतिका पाहुनाले हेर्ने भए । अब त लाज होला बाटो बनाऊ, पानी सफा बनाऊ, धुलो हटाऊ, जसरी हुन्छ मलाई र मेरा पाहुना हिँड्ने बाटो राम्रो बनाऊ ।
आउँदो वैशाख १ गते ‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५’ सुरु गर्ने निर्णय भएको कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भनेका छन् । हालसम्म वर्षमा ५० हजार हाराहारी पर्यटक पुग्ने गरेको कर्णाली प्रदेशमा एकै वर्षमा पाँच लाख पर्यटक पुर्‍याउनु सजिलो भने छैन । कर्णाली प्रदेशको अधिकांश भागमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था नाजुक छ । तर पनि कर्णाली सारै राम्रो छ, म रारा बाहेका मेरा कर्णालीमा खुब राम्रा हेर्ने क्षेत्र छन् । डोल्पाको शे गुम्बा, फोक्सुन्डो ताल, त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, जुम्लामा पर्ने नेपाली भाषा तथा सभ्यताको उद्गम थलो सिँजा उपत्यका, सुर्खेतको काँक्रेबिहार, बुलबुले ताल, देउता बज्यै मन्दिर, कालीकोटको पञ्चदेवल, रास्कोट, पाताल छहरा, हुम्लाको लिमी उपत्यका, मानसरोवर यात्रा हुन् । त्यस्तै सल्यानको कुपिन्डे दह, रुकुमको स्र्यापु दह, जाजरकोटको ठाकुरजी दह, दैलेखको ज्वाला, दुल्लु दरबार पनि कर्णाली प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय स्थल हुन् ।
(कर्णाली प्रदेश, राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट)